Dowlada Wadanka Ruushka oo Markab Hor leh u soo direysa Xeebaha Dalka Soomaaliya – SBC
Dowlada Wadanka Ruushka oo Markab Hor leh u soo direysa Xeebaha Dalka Soomaaliya
Dowlada Wadanka ruushka ayaa shaacisay in Xeebaha Soomaaliya ay soo dirtay Markab Dagaal oo hor leh kaasi oo badeli doona markab horey uga joogka xeebaha gacanka Cadmeed ee u dhow soomaaliya tan iyo bishii September ee sannadkii tagey.
Afhayeen u hadlay CIidamada Badda ee wadanka Ruushka ayaa wakaalada wararka u faafisa Wadankaas u sheegay in Markabkan uu yahay mid awood u leh inuu gelbiyo gadiidka dowlada Ruushka ee u socda Dalalka Caalamka iyo inuu ka fujiyo Burcad badeeda Soomaalida gadiid badeedka kale ee istimaala Xeebaha u dhow Soomaaliya.
Ciidamada Badda ee wadanka Ruushka ayaa howlgalada Burcad badeeda ka waday Xeebaha Dalka Soomaaliya dhowrkii sanno ee ugu danbeeyay kuwaasi oo ay kaga hortagayeen weerarada burcad bdeeda Soomaalida ay ku qadaan gadiidka Maraya xeebaha u dhow Soomaaliya.
Howlgalka Ciidamada Badda ee ruushka ee socday tan iyo 2008-dii ayaa waxaa ay galbiyeen 130 gadiid ganacsi oo marayay gobo ka mid ah xeebaha ugu amaanka xun ee u dhow Dalka Soomaaliya.
Ciidamada wadamada Caalamka ka jooga Xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa ay howlgalkan soo wadeen tan iyo intii ay kordheen weerarada hubeysan ee Kooxaha Burcad badeeda Soomaalida ay ka geystaan Xeebaha iyaga oo gadiidka ay qafaashaana ka qaata lacag madax furasho ah oo aad u farabadan.
Dowladaha caalamka ee ciidamada ay ka jooga xeebaha ayaa dadka somaalida waay ka qabaan aragtiyo kala duwan oo ku aadan inay qabtaan danaha ay u joogaan Xeebaha u dhow Dalka Soomaaliya.